Naya Post Nepal | बुहारीले आफ्नै सासुलाई ह’सियाले घो’पी ह’त्या गरेपछी… गाउमा उठिबास ! (भिडियो सहित)
बुहारीले आफ्नै सासुलाई ह’सियाले घो’पी ह’त्या गरेपछी… गाउमा उठिबास ! (भिडियो सहित)
दाङ – सासुको ह”त्या गरेको आ’रो’पमा पश्चिम दाङमा बुहारी प”क्राउ परेकी छिन् । प”क्राउ पर्नेमा बबई गाउँपालिका–७ रावततारा निबासी २२ बर्षकी एक महिला रहेको ईलाका प्र”हरी कार्यालय खिलतपुरले जानकारी दिएको छ ।
महिलाले हसियाँ र च”क्कु प्र”हार गरी ६५ बर्षकी सासु गंगी कवँरको हत्या गरेकी थिइन् । मंगलबार दिउँसो २ बजे शान्तिनगर गाउँपालिका–६ स्थित कोरबाङको नर्सरीमा मृ’त फेला परेकी गंगीको ह”त्या भएको निकर्षमा प्र’हरी पुगेपछि बुहारीलाई सोधपुछका लागि सोही दिन साँझ नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बुहारीले आफुले नै ह”त्या’ गरेको स्वीकार गरेकी थिइन् । रोजगारीको सिलसिलामा स्याङजा बस्दै आएका श्रीमानले तुलसीपुर बजारमा कोठा भाडमा बस्दै आएकी श्रीमतीलाई घरमा गएर बुवाआमासंग बस्नुपर्ने भनेपछि सासु–बुहारी बिच मन’मुटाव बढ्दै गएको थियो ।
सासु एकघन्टा अघि खेतमा मसुरो काट्न गइन । त्यसको आधा घन्टापछि तरकारी काट्ने चु”क्क लिएर गएकी बुहारीले आ”क्रमण गरेर सासुको ह”त्या गरिन् ।’
ईलाका प्र’हरी कार्यालय खिलतपुरका प्र”हरी निरीक्षक नविन चुडालीले भने । यस घ ट ना बारे आफन्तहरु यस्तो भन्छन । भिडियो हेर्नुस :
यो पनि – काठमाडौं : अभिनेता पल शाह पुर्पक्षका लागि जेल च’लान भएका छन् । जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशपछि शाह बिही बार जेल चलान भएका हुन् । अर्का प्र’तिवा’दी कृष्णराज जो शीलाई भने अदालतले एक लाख ध’रौटी छा’ड्ने आ’देश गरेको छ । जोशी पलका म्यानेजर हुन् ।
२०७८ चैत्र १२, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 590 Views